ဗီဒီယိုကဒ် | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2014 မောင်းသူ 0
NVIDIA Series Driver Support ~ Recommended for end-customers. Includes download options for driver-only and driver-with NVIDIA software. device ကိုမော်ဒယ်: NVIDIA Quadro FX 3700M All of drivers are not […]
စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို OS ကို-STORE Software များ မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Samsung က ပရိုဆက်ဆာ ဥပဒေရေးရာအနက် စီပီယူ နည်းပညာ Technology_Internet HTC က device ကိုမော်ဒယ် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HD Graphics
ဥပဒေရေးရာအနက် ပရိုဆက်ဆာ HD Graphics Technology_Internet OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Intel က Server ကို HTC က နည်းပညာ Qualcomm မှ Software များ စမတ်ဖုန်းများ Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Samsung က Intel က device ကိုမော်ဒယ် processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း Sony Ericsson က စီပီယူ 64-နည်းနည်းက Windows ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Samsung ရဲ့ Galaxy